टेलिकमको फोजीमा केके हुनेछ सुविधा ? जान्नैपर्ने केही कुरा- विज्ञान र प्रविधि - कान्तिपुर समाचार
टेलिकमको फोजीमा केके हुनेछ सुविधा ? जान्नैपर्ने केही कुरा
काठमाडौँ — नेपाल टेलिकमले देशैभरी फोजी विस्तारको लागि काम सुरु गरेको छ । फोजी विस्तारको जिम्मा पाएका कम्पनीहरुले सर्वेक्षणको काम अन्तिम चरणमा पुर्‍याएको टेलिकमले जनाएको छ । टेलिकमको फोजी विस्तारको कूल लागत १८ अर्ब ७१ करोड छ ।
फोजीसहित थ्रीजी र टुजी
टेलिकमले देशैभर फोजी विस्तार गरे पनि टेलिकमका प्रयोगकर्ताले फोजी नै प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने छैन्। उनीहरुले आफ्नो आवश्यकता हेरी टुजी, थ्रीजी पनि प्रयोग गर्न सक्नेछन्।
टेलिकमले विस्तार गर्न लागेको फोजी नेटवर्कमा अधिकतम स्पिड १३० एमबीपीएस हुनेछ। थ्रीजी अपग्रेड गरी फोजी बनाउँदा अधिकतम स्पिड ३२ एमबीपीएस मात्रै हुन्छ। अहिले काठमाडौं र पोखरामा सीमित टेलिकमको फोजी सेवाको अधिकतम स्पिड ३२ एमबीपीएस मात्रै हो। यसैले टेलिकमले विस्तार गर्न लागेको फोजीको स्पिड धेरै हुनेछ।
भ्वाइस ओभर एलटीई नाम दिइएको यो सुविधाले मोबाइल नेटवर्कमा हुने भ्वाइस कलको गुणस्तर बनाउँनेछ। डाटाको गतिजत्तिकै भ्वाइस -आवाज) को गति पनि बढ्नेछ। यसले फोन लाग्ने समय पनि घट्नेछ। साथै, यो सुविधामा भिडियो कल गर्नको लागि तेस्रो एपको आवश्यकता पनि आवश्यक पर्दैन।
यसमा हुने सुविधा भ्वाइस ओभर वाईफाई अर्थात भीओवाइफाई पनि हो। भिओवाइफाई भिओएलटीईकै विस्तारित रुप हो। यसको सबैभन्दा ठूलो सुविधा भनेको मोबाइलको नेटवर्क बिना पनि वाइफाइको सहयोगमा फोन लाग्नु हो। कुनै स्थानमा मोबाइल नेटवर्क कम छ वा छदै छैन तर वाइफाईमा मोबाइल कनेक्ट छ भने वाइफाईकै सहयोगमा अर्को मोबाइल नम्बरमा फोन गर्न सक्नु यसको विशेषता हो। अहिलेका चल्तीमा रहेका २० हजार मूल्य माथिका अधिकांश स्मार्टफोनले यो प्रविधि सपोर्ट गर्छन्। भारतमा पनि जियो सहितका केही मोबाइल सेवा प्रदायकहरुले भर्खरै यो प्रविधि परीक्षणको रुपमा सुरु गरेका छन्।
सेल्फ अर्गनाइजिङ नेटवर्क
टेलिकमको फोजी नेटवर्कमा पूर्णरुपमा स्वचालित सेल्फ अर्गनाइजिङ नेटवर्क (एसओएन) प्रविधि रहने छ। यसको अर्थ हो कुनै बीटीएस टावरमा कुनै समस्या आएर नेटवर्कमा गडबडी भए त्यो भन्दा पर रहेको अर्को बीटीएस टावरले त्यो समस्या बुझेर आफ्नो क्षेत्र बाहिरको मोबाइललाई नेटवर्क प्रदान गर्नेछ। यो पूर्ण रुपमा स्वचालित प्रविधि हुने टेलिकमले जनाएको छ।
फोजी विस्तारको क्रममा घना बस्ती र ठूला घरहरु भएका स्थानमा नेटवर्कलाई सुचारु बनाउन करिब ६ हजार साना टावर राखिने टेलिकमले जनाएको छ। काठमाडौं उपत्यकासहित देशका मुख्य सहरहरुमा यस्ता साना खालका टावर हुनेछन्। यस्ता टावरले नेटवर्कलाई बलियो बनाउन सघाउँनेछन्। घरको भूमिगत तलामा फोन नलाग्ने, धेरै भीड हुने स्थानमा फोन राम्ररी नसुनिने समस्या समाधानको लागि यसो गर्न लागिएको हो।
देशैभर टेलिकमले विस्तार गर्ने फोजीको नेटवर्क पछि फाइभजी विस्तार गर्नको लागि पनि उपयुक्त हुनेछ। देशैभर फोजी विस्तार पछि टेलिकमले परीक्षणको रुपमा काठमाडौंसहित पोखरा, नेपालगञ्ज र बिराटनगरमा फाइभी नेटवर्कको परीक्षण गर्नेछ। फाइभजी नेटवर्क अहिले पनि परीक्षणको चरणमा छ।
कसले पाए काम?
हङकङस्थित चाइना कम्युनिकेसन सर्भिस इन्टरनेसन (सीसीएसआइ) ले रेडियो एक्सेस नेटवर्क (र्‍यान) र जेडटीईले कोर नेटवर्क विस्तारको काम पाएका छन्। टेलिकमको टावरहरुबीच सम्पर्क स्थापित गराउने काम कोर नेटवर्कले गर्छ भने ग्राहकको फोनबाट टावरसँग सम्पर्क गराउने काम रेडियो एक्सेस नेटवर्कले गर्छ।
अहिले नेपाल टेलिकम र एनसेलले दिइरहेको फोजी सेवा थ्रीजी नेटवर्कमा गरिएको अपग्रेड हो। टेलिकमले काठमाडौं र पोखरामा २०७३ पुस १७ बाट फोजी सेवा सुरु गरेको थियो। नेपालमा पहिलो पटक टेलिकमले फोजी सुरु गरेको भए पनि २०७४ जेठबाट फोजी सेवा सुरु गरेको निजी क्षेत्रको सेवा प्रदायक एनसेलले दुई दर्जन बढी सहरमा सेवा विस्तार गरिसकेको छ।
प्रकाशित : वैशाख ९, २०७६ १४:५२
नेकपाको अध्यक्षमा रोशनबहादुर गाहा मगर
वैशाख ९, २०७६ नारायण शर्मा
नवलपरासी — पूर्वी नवलपरासीमा नेकपाको अध्यक्षमा रोशनबहादुर गाहा मगर चयन भएपछि जिल्लाभित्र नेकपाको राजनीति एकाएक तातेको छ ।
नेकपाका शक्तिशाली केन्द्रीय सदस्य तिलक महतको कडा आपत्तिबीच रोशन गाह जिल्ला अध्यक्षमा चयन भएको विषय यहाँको राजनीतिमा अर्थपूर्ण मानिएको छ।
संघीय सांसद तथा नेकपाका केन्द्रीय सदस्य तिलक महत आफ्ना बलिया प्रतिस्पर्धी रोशन बहादुर गाहालाई पार्टीको जिल्ला अध्यक्षमा ल्याउँदा आफू कमजोर हुने भन्दै माओवादीका कुनै नेतालाई जिल्ला अध्यक्ष बनाउने र आफू जिल्ला इन्चार्ज हुने दाउमा थिए।
प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष केपी ओली निकटमानिने महतको कडा विरोध र असहमतिबीच गाहले पार्टी अध्यक्षको पद खोसेर लिएको भन्दै जिल्लामा चर्चा सुरु भएको छ।
पछिल्लो समय महत र गाह पानी बाराबारको स्थितिमा छन्।
गत शनिबार प्रधानमन्त्री केपी ओली कावासोतीमा सरकारी कार्यालयको उद्घाटन समारोहको मञ्चमा बोलाउँदा समेत रोशन गाह, अर्का प्रभावशाली जिल्ला नेता जीवन श्रेष्ठ (नेकपा एमालेका जिल्ला पार्टी सचिव) र अर्का प्रदेशसभा सदस्य जनकलाल श्रेष्ठ मञ्चमा नगएर आम कार्यकर्ता बस्ने लहरमा भुइमा राखिएको कुर्चिमा बसेका थिए। ३ जना सांसदलाई मञ्चमा पटक पटक बोलाउदापनि नगएर तल्लो रो मा बसेका थिए।
प्रधानमन्त्री सहभागी त्यो कार्यक्रममा सांसद महतले नवलपरासीमा भएका अहिले सम्मका सबै विकासका काम आफू एक्लैले गरेको भन्ने अभिव्यक्ति दिएको भन्दै त्यसमा असहमति जनाउँदै ती जिल्ला नेता मञ्चमा नगएका हुन्।
पछिल्लो राजनीतिमा यहाँका चर्चित नेता तथा पूर्वसांसद जीवन श्रेष्ठ, रोशन गाहा र अर्का प्रदेश सभा सदस्य जनकलाल श्रेष्ठ एउटा खेमा रहेका छन् भने तिलक महत एक्लिएका छन्। ती सबै पूर्व एमालेका जिल्ला नेता हुन्।
पूर्व सांसद र प्रदेशसभा सदस्य समेत रहेका गाहा पूर्व एमालेका जिल्ला अध्यक्ष समेत हुन्। गाहा २०७४ को निर्वाचनमा नवलपुर क्षेत्र नंबर १ ख बाट प्रदेशसभामा निर्वाचित भएका थिए। मतदाता र कार्यकर्ताबीच लोकप्रिय रहेका गाहलाई प्रदेश सभा सदस्य हुँदाहुँदै उनैलाई जिल्ला अध्यक्ष नदिन पार्टी अध्यक्ष केपी ओलि निकट मानिने महत अन्तिमसम्म पनि लागेको पार्टी स्रोतले दाबी गरेको छ।
स्थानीय तहमा पनि भागबण्डा
आठ वटा स्थानीय तह रहेको नवलपुरमा पूर्व एमालेलाई पाँच अध्यक्ष र पूर्व माओवादीलाई तीन अध्यक्ष दिने सहमति भएको छ।
पूर्व एमालेले गैंडाकोट नगरपालिका, कावासोती नगरपालिका, बुलिङटार गाउँपालिका, बौदीकाली गाउँपालिका, विनयी त्रिवेणी गाउँपालिकाको अध्यक्ष पाउने भएको छ भने पूर्व माओवादीले देवचुली नगरपालिका , मध्यबिन्दू नगरपालिका र हुप्सेकोट गाउँपालिकाको अध्यक्ष पाउने भएको छ।
नेकपाका नेता बालकृष्ण रानाभाटका अनुसार गाउँपालिकाका वडाहरु पूर्व एमालेले ६७ प्रतिशत र पूर्व माओवादीले ३३ प्रतिशत पाउने सहमति भएको छ भने नगरपालिकाका वडाहरुमा पूर्व एमालेले ५७ प्रतिशत र पूर्व माओवादीले ४३ प्रतिशतको आधारमा सहमति भएको छ।
प्रकाशित : वैशाख ९, २०७६ १४:४७
साइन्स ओलम्पियाडकाे उपाधि पराजुलीलाई
नेपालको सूक्ष्म जीवीय पारिस्थितिकी अनुसन्धानद्वारा उजागर गर्न सुझाव
स्मार्टफोनको लतमा बालबालिका
फाइभजी : के हो कोर र र्‍यान ?
विन्डोज टेन अर्ब नजिक
ब्ल्याकबेरीको डिजाइन बन्द